Ngawaphi amacebiso ezokhuseleko anokunikwa ababuki zindwendwe ngeendawo zabo zokuhlala? - Indawo Yoncedo yeAirbnb
Ukuba ngumbuki zindwendwe wendawo yokuhlala kunoxanduva oluthile. Nazi izixhobo zokukukunceda endleleni.
Soloko ubhatala kwaye unxibelelana ngo-Airbnb. Sebenzisa inkqubo yokuthumela imiyalezo ye-Airbnb ukuze wazane neendwendwe zakho uze wabelane nazo ngoko zimele zikulindele kuhambo okanye kwindawo yakho.
Funda iinkcukacha kunye noluvo lweendwendwe eziseza kutyelela indawo yakho, uze ukhangele iinombolo zefowuni eziqinisekisiweyo, iiakhawunti zeewebhsayithi zokuncokola, kwakunye nezimvo zabanye abantu. Ukuba iindwendwe ezinokubakho azinazo iinkcukacha eziqinisekisiweyo, ungazicela ukuba zizifake.
Yithembe indlela oziva ngayo: Ukuba awuluthembi ubhukisho, sukulwamkela.
Gcwalisa Imithetho yakho Yendlu kunye Nencwadi Yendlu
Ukugqiba kwakho Imithetho Yendlu kunye Nencwadi Yendlu kunceda iindwendwe zazi ukuba zilindele ntoni. Faka nantoni na ongathanda ukuba bayazi abantu ngaphambi kokuba babhukishe—ngokomzekelo, chaza ukuba (okanye apho kuvumeleke khona) kuvumelekile na ukutshaya, nokuba zikhona na iindawo ezithile abangenakungena kuzo, inombolo eyimfihlo yewifi, okanye ukuba iindwendwe kufuneka zikhulule izihlangu ngaphambi kokuba zingene.
Ukuba intlekele iyayichaphazela ingingqi yakho yaye ungathanda ukuncedisa, ngokwamkela abantu abadinga indawo yokuhlala ngokungxamisekileyo, ungadwelisa indawo yakho simahla.
Inkqubo Ye-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe yakwa-Airbnb inikezela ngokhuseleko lomonakalo osisiseko ofikelela kwi-$1 000 000 ngesehlo ngasinye kwimeko apho umntu wesithathu efaka ibango lokwenzakala emzimbeni okanye lokonakala kwendlu okubandakanya ukuhlala ixesha endaweni yakwa-Airbnb.
Usenako kanti ukuthetha nenkampani yakho ye-inshorensi ukuze wongeze olunye ukhuseleko lwe-ishorensinge-inshorensi yomntu oqeshileyo okanye eyomnikazi wendawo
Beka izinto ezimele zifikelelwe kwindlu yakho
Ungacela iindwendwe zakho ukuba zigcwalise iinkcukacha zokuqinisekisa ezithile ngaphambi kokuba zibhukishe, ezifana neSazisi Esiqinisekisiweyo.
Ukongeza idiphosithi yokhuseleko kwindlu yakho kungaba luncedo ukukukhuseleni xa kunokuthi kwenzeke ingozi, efana nokuchitheka kwewayini kwikhaphethi.
Funda amanqaku e-Airbnb Endlela Yokwamkela Indwendwe Ngendlela Efanelekileyo
Siyabakhuthaza ababuki zindwendwe ukuba bacingisise ngeembopheleleko zabo. Ukwamkela iindwendwe kunika ithuba lokuba lezinto onokuzonwabela ezininzi, kodwa kuhamba nezinga elithile lokuzibophelela. Sibhale amanqaku okwamkela indwendwe ngendlela efanelekileyo anokukunceda wazi izinto ezifunekayo ukuze ube ngumbuki zindwendwe ophumelelayo kwingingqi yakho.
Khumbula: Kwimeko yongxamiseko, okanye ukuba uzibhaqa usemngciphekweni wokungakhuseleki, qhagamshelana namapolisa asekuhlaleni okanye isebe leenkonzo zongxamiseko ngoko nangoko.
Ndiyifaka okanye ndiyilungise njani imithetho yam yendlu?
I-inshorensi yomninikhaya isebenza njani no-Airbnb?